Nhau - Chii chandingaite kana iyo Bluetooth remote control ikatadza? Maitiro ekubatanidza iyo Bluetooth kure
Chii chandinofanira kuita kana iyo Bluetooth kure kudzora ikatadza? Maitiro ekubatanidza iyo Bluetooth kure
Mazuva ano, mazhinji maTV akangwara akashongedzerwa neBluetooth remote control seyakajairwa, asi iyo yekudzivirira kure inokundikana kana ikashandiswa kwenguva yakareba. Hedzino nhatu nzira dzekugadzirisa kure kudzora kutadza:
1. Tarisa magetsi
Remote control pachayo haina switch yemagetsi, uye bhatiri rinoshandisa simba rayo nguva dzese mukutonga kuri kure, kunyanya mamwe ekupedzisira-ekupedzisira uye ekare zvishandiso anoshandisa iyo yekare vhezheni yeBluetooth kufambisa protocol, uye bhatiri rinoshandisa simba rakawanda (kutora Bluetooth 4.0 semuenzaniso, Simba rayo rekushandisa rinongova chegumi cheBluetooth 3.0 uye 2.1 vhezheni).
Mushure mekutarisa magetsi, iyo yekumusoro control haigone kushandiswa (kazhinji mushure mekunge iyo TV system yagadziridzwa), iwe unofanirwa kuyedza kugadzirisa zvekare. Tora Xiaomi TV semuenzaniso (mamwe mabhureki anoteedzera nhanho dziri mubhuku): Svika padhuze neiyo smart TV uye pfuurira kure kure panguva imwe chete Bhatani repamba uye bhatani remenu pane chishandiso zvinogona kupedzwa nekunzwa system kukurumidza kwe "di".
3. Kugadzirisa mabhatani
Vamwe vatongi vari kure avo vanga vachishandiswa kwenguva yakareba vanogona kunge vatadza bhatani. Izvi zvinokonzereswa nekukwegura kweiyo conductive layer yeiri kure kutonga. Mushure mekudzora kure kure, pane chivharo chakatenderera chakapfava kuseri kwebhatani rega, iro rinogona kushandiswa kubvisa tin tirairi. Namatira tepi-sided tepi kumusana uye cheka iyo kune saizi yekopu yekutanga uye woiisa mukapu yekutanga kuti utsive iyo yakasakara inoita (usayedze zviri nyore kana usina ruzivo).
Ehezve, mushure mekudzora kure kure, inogona zvakare kudzorwa nharembozha APP uye kuiswa mune mbeva kudzora. Uye zvakare, tichienzanisa neBluetooth nzira yekudzora kure, infrared remote control ine hunhu hweyakareruka mamiriro uye akavimbika mashandiro, uye mashandiro acho anoenderana zvakanyanya nemaitiro echizvarwa chekare chevashandisi. Kana mushandisi ari chete wekuona mabhaisikopo, hapana musiyano mukuru pakati peiyo infrared remote control neBluetooth remote control; asi kana paine zvido zvekutamba mitambo yakasarudzika, njere dzeizwi, nezvimwewo, yepamusoro-vhezheni yeBluetooth yekudzivirira kure ndiyo sarudzo yakanyanya kunaka (Bluetooth 4.0 inoenderana neprotocol).
Post nguva: Jun-12-2021